ဆေးပညာကို အဝေးက လေ့လာနိုင်ပါ့မလား။ | ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
ဆေးပညာကို အဝေးကနေ လေ့လာနိုင်ပါ့မလား။
Maite Ncuesa | 06/06/2022 21:01 | ဂရေဒါ
ယနေ့အဝေးသင်သင်တန်းသည် များစွာသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးပါသည်။ ကျောင်းသားအား ၎င်းတို့၏ စာသင်ချိန်ကို စီစဉ်ခွင့်ပြုပါ။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ကျောင်းသားအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များကို အခြားတာဝန်များနှင့် ညှိနှိုင်းရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အနာဂတ်ကို တွေးတောသည့်အခါတွင် အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချတတ်ကြသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ လေ့လာသည့်အရာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။. ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် တိကျသော နည်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စင်တာတစ်ခုတွင် စာရင်းသွင်းကြသည်။
La ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်၏။ တကယ်တော့ ကျောင်းသားဆိုတာ သူ့ဘဝရဲ့ ရှည်လျားတဲ့ ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ဆေးပညာကို အဝေးက လေ့လာနိုင်ပါ့မလား။ ၎င်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း မကြာခဏ ပေါ်ပေါက်လာသော မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ နည်းပညာသည် ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်တွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို တွန်းအားပေးသော်လည်း ၎င်းသည် ၎င်း၏ ကန့်သတ်ချက်များလည်း ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့်, လောလောဆယ် ကာလကို အွန်လိုင်း သို့မဟုတ် အဝေးမှ ပြီးမြောက်ရန် ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိပါ။. တက်ရောက်ခြင်းသည် သင်ယူမှုအတွက် စံပြအကြောင်းအရာကို ဖန်တီးပေးသည်။ တကယ်တော့ ဆေးကျောင်းသားတွေဟာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ ဌာနတွေမှာ အလုပ်သင်တွေ လုပ်ကြပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် အထူးပြုဘာသာရပ်တွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကို သင်ယူရန် အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
1 ဆေးပညာကို အဝေးကနေ လေ့လာလို့ မရဘူး။
2 အဝေးမှသင်ကြားသော အခြားသော ကျန်းမာရေးသိပ္ပံသင်တန်းများ
ဆေးပညာကို အဝေးကနေ လေ့လာလို့ မရဘူး။
မျက်နှာချင်းဆိုင်လေ့ကျင့်မှုနှင့် အွန်လိုင်းအတန်းများ၏ အားသာချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ပုံစံတစ်ခုရှိသည်။ ရောစပ်ပုံစံဖြင့် သင်ကြားပေးသော ခရီးစဉ်များသည် ပိုမိုပျော့ပြောင်းသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်၊ အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာမှတဆင့် ဖန်တီးထားသော အကြောင်းအရာအချို့ရှိပါသည်။ သို့သော် ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံသည် သာလွန်ထင်ရှားနေဆဲဖြစ်သည့် မျက်နှာချင်းဆိုင်လေ့ကျင့်မှုကို နောက်ခံတွင်ထားခဲ့မည်မဟုတ်ပေ။ ခိခိ ၎င်းသည်အချို့သောတက္ကသိုလ်များတွင်ပါရှိသောအဆိုပြုချက်ဖြစ်သည်၊ ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုစပိန်တက္ကသိုလ်တွင်ရှာမတွေ့သေးပါ။.
သို့သျောလညျး တက္ကသိုလ်ပညာသင်ကြားပြီးနောက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းချဲ့ထွင်ရန် အွန်လိုင်း သို့မဟုတ် ရောနှောလေ့ကျင့်မှုကို ရွေးချယ်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်။. ဤကိစ္စတွင်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သည် ၎င်းတို့၏ သင်ယူမှုတွင် အချိန်ကို ဆက်လက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် အခွင့်အလမ်းရှိသည်- ဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်ချက်များ၊ ပရိုဂရမ်၏ အစီအစဉ်၊ လျှောက်လွှာ၏ အတိုင်းအတာနှင့် ၎င်းကို ပေးဆောင်သော အသိပညာတို့ကို စစ်ဆေးပါ။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ နည်းပညာဟာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာ ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေပါတယ်။ Telemedicine သည် ဤဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ ၎င်းသည် ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ပိုမိုမြင်သာနိုင်စေသည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် လူကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သော သင်ယူမှုကာလတစ်ခုအတွင်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။. ဤနည်းဖြင့် စာသင်ခန်းသည် ကျောင်းသားများ၏ သံသယများကို ဆရာက ဖြေရှင်းပေးသည့် နေရာဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျောင်းသားတစ်ဦးစီသည် အလားတူအခြေအနေမျိုးတွင်ရှိသော အတန်းဖော်များနှင့် သင်ယူမှုအဆင့်ကို မျှဝေသည်။
မည်သည့်ပညာရှင်မဆို ကျင့်သုံးခြင်းသည် တာဝန်ယူမှု၊ ကတိကဝတ်နှင့် ပြင်ဆင်မှု လိုအပ်သည်။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အမှားသည် ကွဲပြားသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် သုခသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဆင့်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။ ယုံကြည်မှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး၊ နားထောင်ခြင်းနှင့် တစ်ဦးချင်း အာရုံစိုက်မှုတို့သည် ထိုကဲ့သို့သော လူသားဆန်သော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကို ကျင့်သုံးရာတွင် အပြုသဘောဆောင်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည့် အချက်အချို့ဖြစ်သည်။
အဝေးမှသင်ကြားသော အခြားသော ကျန်းမာရေးသိပ္ပံသင်တန်းများ
တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ ကျောင်းသားသည် ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်တွင် အထူးပြုထားသော အခြားနယ်ပယ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် ဆုံးဖြတ်သည်။ စိတ်ပညာဘွဲ့သည် အလိုအပ်ဆုံး အရည်အချင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. International University of Valencia သည် စိတ်ပညာဘွဲ့နှင့် စကားပြောကုထုံးဘွဲ့တို့ကို သင်ကြားပေးသည်။ စိတ်ပညာဘွဲ့ကို Uned နှင့် UNIR တို့တွင်လည်း သင်ကြားပေးပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဥရောပတက္ကသိုလ်သည် လူသားအာဟာရနှင့် အစားအသောက်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့ဒီဂရီကို အဝေးမှ သင်ကြားပေးသည်။. ကျန်းမာရေး သိပ္ပံဘာသာရပ်ကို အထူးပြုလိုပါက တက္ကသိုလ် ကမ်းလှမ်းချက်ကို တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း ခရီးစဉ်များသည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အခြားရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် လောလောဆယ်တွင် အဝေးသင် ဆေးပညာကို လေ့လာရန် မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ သို့သော်၊ သင်သည် ကျန်းမာရေးသိပ္ပံနယ်ပယ်အတွင်း အခြားအခြားရွေးချယ်စရာများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » လေ့လာမှုများ » ဂရေဒါ » ဆေးပညာကို အဝေးကနေ လေ့လာနိုင်ပါ့မလား။
English Philology ဆိုတာ ဘာလဲ။